न कुनै रोग न खाने लत तर पनि तौल ३३० केजी, कसरी? - Everest Dainik - News from Nepal
न कुनै रोग न खाने लत तर पनि तौल ३३० केजी, कसरी?
उमर दराज नंगियाना /बीबीसी । नूर अल हसन सुतेर खाना खान्छन् किनभने बसेर खाने कोसिसमा उनको हात टेबलसम्म पुग्न सक्दैनँ र बीचमा पेट आउँछ ।
उनी सुत्दा घोप्टो परेर सुत्छन् किनभने सिधा सुत्दा उनलाई सास फेर्न गाह्रो हुन्छ ।
पाकिस्तानको सुबा पंजाब शहर सादिकाबादमा बस्ने साठी वर्षका नूल अल हसन पछिल्लो आठ वर्षदेखि यस्तै हातलमा बाँच्न बाध्य भएका छन् ।
यसको कारण हो उनको असामान्य तौल जुन यतिबेला ३ सय ३० किलो छ ।
उनको जीवन घरको एउटा कोठासम्म मात्र सिमित थियो र उनको दिशा–पिसाबका लागि एउटा कुर्सी उनकै कोठामा राखिएको थियो ।
नूर अल हसनलाई हालै सेनाको एउटा एयर एम्बुलेन्समार्फत् लाहौर ल्याइयो । त्यहाँको शालीमार अस्पतालमा उनको उपचार चलिरहेको छ ।
मोटोपना कम गर्नका लागि उनको शल्यक्रिया गरिनेछ ।
अस्पतालमा उनका लागि एउटा विशेष खाट तयार गरिएको छ । त्यहाँ डक्टरको निगरानीमा उनी धेरै वर्षपछि कोल्टो परेर सुत्न सकेका छन् ।
अब उनलाई मोटोपना कम गर्नका लागि लेप्रोस्कोपिक सर्जरीका लागि तयार गरिँदैछ ।
अस्पतालको बेडमा सुतिरहेका नूर उल हसनले १० वर्षदेखि घरमै सिमित हुनुपरेकोमा आफूलाई कैद महसुस गर्ने गरेको उनले बताए ।
‘म तपाईंलाई के भनुँ । मेरो आफ्नै भतिजोको मृत्यु भयो तर म उसको अन्तिम संस्कारमा पनि जान सकिनँ । म उभिन सक्दिनथेँ । न बस्न नै सक्थेँ ।’
नूर अल हसनका अनुसार उनलाई आफ्नो जीवन देखेर दिक्क लाग्न थालिसकेको थियो । उनी भन्छन्, ‘मलाई कसैले भनेको थियो कि मोटोपनाको त उपचार हुनै सक्दैनँ । मैले अल्लाहसँग कि त मलाई सम्हाल्न वा सुखीको दिन देखाइदिन प्रार्थना गरेँ ।’
उनको तौल किन यसरी बढ्यो ?
मोटोपनाको शिकार हुनुअघि नूर अल हसन ट्रक चलाउँथे । अली सुस्त उनी धेरैजसो बसिरहन्थे । आफूलाई यत्तिका तौल बढ्न प्रेरित गर्ने कुनै रोग पनि नलागेको नूर अल हसनले दाबी गरे ।
उनी खानको समेत शौखिन नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘म भोक लाग्दा मात्र खान्थेँ । एक प्लेट अचारसँग दुईवटा रोटी ।’
नूर उल हसनका अनुसार उनको ढिला सुस्ती गर्ने बानीले नै उनको तौल बढ्यो ।
‘म खाना खाएपछि बस्थेँ । खाना खाएपछि गाडीको स्टेरिङ समाउँथे र गाडी चलाइरहन्थेँ ।’
सुरुमा उनको तौल बिस्तारै बढ्न सुरु भयो । तर उनले त्यसलाई ध्यान दिएनन् ।
‘म व्यायाम गर्दिनथेँ, हिँड्दैनथेँ र पसिना आउने कुनै पनि काम गर्दिनथेँ ।’
उनको तौल जतिजति बढ्न थाल्यो उनी पहिलेको भन्दा सुस्त हुन थाले । यस्तो समय आयो कि उनले हिँड्न–डुल्न पनि कम गरिसकेका थिए । जुन क्रमशः बढ्दै गयो र अन्ततः पूर्ण रुपमा बन्द भयो ।
डाक्टरका अनुसार त्यसपछि उनको तौल अत्यधिक बढ्न सुरु भयो । पछिल्लो १० वर्षमा उनको तौल डेढ सय किलो बढेको छ ।
नूर उल हसनको शल्यक्रिया कसरी हुनेछ ?
डाक्टर माजका अनुसार नूल अल हसनका शल्यक्रिया जुन तरिकाले गरिन्छ त्यसलाई लेप्रोसोकोपिक सिलियो ग्याट्रिटमी भनिन्छ । यो शरीरमा प्वाल पारेर गरिने शल्यक्रिया हो जसमा बिरामीको पेट चिरिँदैन ।
उनका अनुसार यो शल्यक्रियापछि दुई वर्षपछि बिरामीको तौल डेढ सयदेखि दुई सय किलोसम्म कम हुन्छ ।
‘जब नूर उल हसनको तौल कम हुनेछ तब उनको शरीरको बोसो लत्रिनेछ जसलाई प्लास्टिक सर्जरीमार्फत काटेर मिलाइन्छ ।’
डाक्टर माजका अनुसार नूल अल हसनको तौल बढ्नुको प्रमुख कारण उनको सुस्तता हो ।
‘जब तपाईं एक विशेष हदसम्म तौल बढाउनुहुन्छ र बसिरहनुहुन्छ भने तपाईंको शरीरभित्र जाने सामान्य खाना पनि बोसोमा परिवर्तन हुन सुरु हुन्छ ।’
१० वर्षसम्म नूर अल हसन जब घरमा मोटोपनाका कारण कैद भए तब उनकी श्रीमती र छोरीहरुले अरुको घरमा काम गरेर घर खर्च चलाए ।
उनलाई आशा छ कि उनी ठिक भएपछि परिश्रम पर्ने कामको खोजी गर्नेछन् ।
ट्याग्स: Noor al Hasan